Wararka - Curator Hotel & Dalxiiska Ururinta Waxay Doorataa Ka Falcelinta Mobaylka Sida Bixiyaha ay Doorbiday ee Aaladaha Badbaadada Shaqaalaha
React Mobile, bixiyaha aadka loogu kalsoon yahay ee xalalka badhanka argagaxa ee huteelka, iyo Curator Hotel & Resort Collection ("Curator") ayaa maanta ku dhawaaqay heshiis shuraako ah kaas oo u sahlaya huteelada ururinta inay isticmaalaan habka ugu wanaagsan ee badbaadada Mobile-ka si ay u ilaashadaan shaqaalaha ammaan. Huteelada ku dhex jira Curator ma geyn karaan React Mobile's geolocation GPS iyo Bluetooth? Tignoolajiyada iftiinka si ay u bixiso saxnaan aan la qiyaasi karin si loo helo shaqaale cidhiidhi ku jira. Shirkaddu waxay leedahay saldhigga macaamiisha hoteelka ugu weyn ee tignoolajiyada badhanka argagaxa.
"Curator wuxuu ku faraxsan yahay inuu la shaqeeyo React Mobile si uu uga caawiyo huteelada xubnaha ka ah inay ilaaliyaan shaqaalahooda," ayuu yiri Austin Segal, Madaxweyne kuxigeenka Curator. "React Mobile kuma cusba qaar badan oo ka mid ah guryaha Curator, iyadoo la geeyay 36 huteelo ilaa maanta. Waxaan ku kalsoonahay inay awood u leeyihiin inay soo gudbiyaan xalal badbaado oo qiimo-ku-ool ah oo sax ah, waxaanan rajeyneynaa inaan la shaqeyno iyaga si aan u ilaalino xubnahayaga hantida ugu muhiimsan - shaqaalahooda."
Xubnaha Curator-ka ee ka qaybqaata waxay ku qalabayn karaan shaqaalahooda aalada badhanka argagaxa LTE si qarsoodi ah xidhan kara oo si degdeg ah loo taaban karo marka loo baahdo. Badhan kastaa wuxuu leeyahay aqoonsi shaqaale u gaar ah. Ilaysyada Bluetooth-ka ku shaqeeya ee yar-yar ee qol kasta ayaa bixiya goobta shaqaalaha. Digniinta iyo goobta waxaa loo diraa shabakada LTE ee maxalliga ah shabakada amniga ee huteelka si kooxda maamulka u ogaadaan sida saxda ah ee u baahan caawimada iyo meesha. Iyadoo digniintu ay firfircoon tahay, nidaamku wuxuu la socdaa goobta shaqaalaha wakhtiga dhabta ah. React Mobile madal dabacsan oo daruur ku salaysan ayaa u sahlaysa huteelada Curator in ay habeeyaan software-ka oo ay la midoobaan hababka kale ee horeba loo isticmaalay. Xarunta React Mobile Dispatch Center waxay habayn doontaa kooxda jawaabta huteelka iyo liisaska ogeysiiska, waxay si firfircoon ula socon doontaa calaamadaha iyo badhamada isku xidhka iyo nolosha batteriga, waxay soo saari doontaa digniinaha, cusboonaysii jawaabayaasha wakhtiga dhabta ah, oo raad-raac oo geli doonta dhammaan taariikhda digniinta.
"React Mobile wuxuu ku faanayaa inuu yahay Curator Hotel & Resort Collection rafiiqa la doortay ee aaladaha badbaadada shaqaalaha," ayuu yiri madaxa React Mobile John Stachowiak. "Hirgelinta tignoolajiyada faafitaanka kadib waxay noqon kartaa hawl adag, laakiin badbaadada shaqaalaha ee khatarta ku jirta, gaar ahaan jawiga hoteelka, waa muhiim. React Mobile waxa ay badhamada digniinta ka dhigaysa mid sahlan oo ka kharash badan in la geeyo. Ma aha oo kaliya in xalkeenu ku qalabayn doono shaqaalaha huteelada Curator baahiyaha aadka loogu baahan yahay - iyo dawladdu u igmatay - aaladaha badbaadada, laakiin iyada oo la maalgelinayo badbaadada shakhsi ahaaneed ee shaqaalaha, React Mobile waxay saamayn togan ku yeelan doontaa soo jiidashada kirada cusub iyo sii haynta shaqada.
Curator Hotel & Resort Collection waa goob martigelineed oo xuddun u ah mulkiilaha oo bixisa beddelka tartan ee huteelada qaab nololeedka madax-bannaan ee raba inay kordhiyaan waxqabadkooda. Curator waxa ay siisaa huteelada xubnaha ka ah heshiisyada hawlgalka ee heerka ugu wanaagsan, adeegyada, tignoolajiyada, iyo faa'iidooyinka kale iyada oo la wada xidhiidhinayo qayb ka mid ah Curator Hotel & Resort Collection-u ogolaanaya xubnaha inay sii haystaan ​​madax-banaanidooda iyo waxa ka dhigaya kuwo gaar ah.
Maanta, React Mobile waxa ay siinaysaa xalalka badhanka argagaxa huteelada ugu fiican dalka, iyada oo in ka badan 600 oo macaamiisha huteelada ah ay ka wakiil yihiin 110,000 qol iyo in ka badan 50,000 badhamada argagaxa la dhigay. Si aad u hesho sharraxaadda fiidyowga ee React Mobile, guji halkan.
Ku saabsan Curator Hotel & Dalxiiska Ururinta
Curator Hotel & Resort Collection waa ururin gaar ah oo ah noocyo yaryar oo gacan lagu doortay iyo huteelo qaab nololeed madax bannaan iyo goobo nasasho leh oo adduunka oo dhan ah, oo ay aasaaseen Pebblebrook Hotel Trust iyo toddoba hawlwadeennada hoteellada hormuudka ka ah. Curator waxa ay siisaa hab-nololeedka huteelada awoodda ay ku wada tartamaan iyada oo u oggolaanaysa xubnahooda xorriyadda ay ku haystaan ​​waxa ka dhigaya hudheelladooda mid gaar ah. Waxay siisaa huteelo qaab nololeed madax banaan faa'iidooyinka ku xidhidhsiga huteelada hab-nololeedka kale ee gaarka ah iyo noocyada ka qaybqaadashada heshiisyada hawlgalka ee heerka ugu wanaagsan, adeegyada, iyo tignoolajiyada. Marka laga soo tago Pebblebrook, xubnaha aasaasay Curator waxaa ka mid ah Benchmark Global Hospitality, Davidson Hospitality Group, Noble House Hotels & Resorts, Provenance, Sage Hospitality Group, Springboard Hospitality, iyo Viceroy Hotels & Resorts. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo www.curatorhotelsandresorts.com.
Ku saabsan React Mobile
La aasaasay 2013, React Mobile waa hogaamiye caalami ah oo bixiya xalalka badhanka argagaxa ee huteelada. Goobtayada badbaadada martigelinta ee heerka ugu wanaagsan waxay ka caawisaa huteelada inay badbaadiyaan shaqaalahooda. Habka Mobile-ka React waa madal furan oo dabacsan taasoo u oggolaanaysa maamulka in uu geeyo agabka jawaabta goobta saxda ah ee xaalad degdeg ah ilbidhiqsiyo gudahood ee heeganka, isagoo ka helaya caawinta meesha looga baahan yahay meel kasta oo guriga ah ama ka baxsan. Marka ay xaalad degdeg ah jirto waqtiyada jawaab celinta degdega ah waa lama huraan waxaana Mobile-ka React uu bixiyaa agabka jawaab celinta degdega ah. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo http://www.reactmobile.com.
Ku saabsan Pebblebrook Hotel Trust
Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) waa aaminaadda maalgashiga hantida ma-guurtada ah ee si guud loo iibiyo ("REIT") iyo mulkiilaha ugu weyn ee huteelada hab-nololeedka magaalooyinka iyo dalxiiska ee Maraykanka. Shirkaddu waxay leedahay 52 huteelo, oo wadartoodu dhan tahay 12,800 qolal marti ah oo ku kala baahsan 14 suuqyo magaalo iyo dalxiis ah iyadoo diiradda la saarayo magaalooyinka laga soo galo xeebta galbeed. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo www.pebblebrookhotels.com oo nagu raac @PebblebrookPEB.
Waqtiga boostada: Agoosto-28-2021